Madax Waynaha Maamulka La Liga-ha Ahna Taageere Wayn Oo Real Madrid Ah Ee Javier Tebas Oo Markale Si Adag U Difaacay Ronaldo. - Laacib.net
Madax Waynaha Maamulka La Liga-ha Ahna Taageere Wayn Oo Real Madrid Ah Ee Javier Tebas Oo Markale Si Adag U Difaacay Ronaldo.
Madax waynaha maamulka horyaalka La Liga ee Javier Tebas isla markaana taageero wayn u ah kooxda Real Madrid ayaa markale si adag u difaacay Cristiano Ronaldo oo uu sheegay in uu hubo in xidiga ree Portugal aanu wax danbi ah galin. Javier Tebas ayaa dhawaan sheegay in aanu aaminsanayn in Cristiano Ronaldo uu galay danbiga lagu soo eedeeyay.
Dhinaca kale madax waynaha maamulka La Ligaha ee Javier Tebas ayaa khasaare wayn ku tilmaamay haddii ay dhacdyo in Cristiano Ronaldo uu ka baxo horyaalka uu maamulo wuxuuna xusay in saamayntii horyaalka Spain uu ku lahaa aduunka uu waxyeelayn doono.
Madax waynaha maamulka LFP ee Javier Tebas oo la hadlayay TV-ga La Sexta ayaa sheegay in ogaanshihiisa dadka ku xeeran Ronaldo iyo waliba xirfadlanimada xidiga ree Portugal in ay isaga xaqiiq u tahay in aanu wax danbi ah laahyn.
Javier Tebas oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Ogaanshiyaha kuwa isaga ku xeeran, sida ay xirfadlayaal u yihiin, anigu wax wanaagsan ayaan ka dareeemiyaa in uu Crisitano uu bilaa danbi yahay. Waxaynu nool nahay waqti marka warkasta oo xafasiiska cashuuraha Spain uu la micno yahay in qof kastaaba uu cashuur lunsade yahay. Anigu waan hubaa in isagu uu bilaa danbi yahay”.
Javier Tebas oo si adag u difaacaya Ronaldo ayaa yidhi: “Waxa aan anigu akhriyay, waxaan hubaa in aanu isagu galin wax danbi ah”. Wuxuuna Javier Tebas iska diiday eedaynta xeer ilaalinta Spain ee ah in Ronaldo uu lunsaday cashuur dhan 14.7 milyan Euros.
Dhinaca kale Javier Tebas oo ka hadlaya khasaaraha uu bixitaanka Ronaldo u keeni karo horyaalka uu maamulo ee La Ligaha ayaa yidhi: “Ma qiyaasi kartid, laakiin waxay noqon kartaa mid aad u wayn isla markaana waxay ugu badnaan doontaa koritaanka La Ligaha ee heerka caalami. Anaga waxay noqon kartaa khasaare aad u wayn oo aan badalkiisa laheli karin”.